Video | Save Burma | Page 2
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် Archive for the ‘Video’ Category
2 hr 17 min – 25 Dec 2007 Source – Democratic Voice of Burma (DVB)
ဗီဒီယိုလင့်ခ် – (Google) http://video.google.com/videoplay?docid=-1624752458075447775&hl=en-GB Written by Lwin Aung Soe December 30, 2007 at 9:01 pm
Inside Myanmar: The Crackdown Part 1: 12mins 45secs
Written by Lwin Aung Soe December 29, 2007 at 7:19 pm
ဗီဒီယို – မြန်မာဒုက္ခသည်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း
Swedish Television. SWEDISH LANGUAGE.
About the border crossings and refugee situation around Mae Sot, Myawaddy Thailand/Burma
Title – Burma SVT
URL – http://www.youtube.com/watch?v=Wkb-NG3GT5Q&feature=related မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်ကျော်၍်အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံရသည့် မြန်မာဒုက္ခသည်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗီဒီယိုဖြစ်သည်။ မြန်မာ မြ၀တီ ဘက်ခြမ်းနှင့် ထိုင်း မယ်ဆောက် ဘက်ခြမ်းတ၀ိုက် အခြေအနေများ ဖြစ်သည်။ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းကို ရိုက်ကူးပြသထားသည်။ ဒုက္ခသည်အချို့နှင့် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်တို့အား တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းများ ပါဝင်သည်။
ဘာသာစကား – ဆွီဒင်၊ မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ်
Written by Lwin Aung Soe December 8, 2007 at 5:45 am
Wanda Potrykus’ YouTube video: Situation in Burma
Video project for Art and Activism. December 2007
Added on YouTube : December 03, 2007
Communications Officer for Canadian Catholic Organization for Development and Peace
Written by Lwin Aung Soe December 8, 2007 at 5:25 am